UPDATE: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Gaalkacyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Gaalkacyo
UPDATE: Nabaddoon caan ah oo Caawa lagu Dilay Gaalkacyo
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa sheegaya, in caawa koonfurta magaaladaasi lagu dilay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug.
Nabaddoonka caawa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray, Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan, waxaana dilkiisa geystay kooxo bastoolado ku hubeysan sida dadka deegaanka ay Halqaran.com u xaqiijiyeen.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in halka uu dilka ka dhacay ay gaareen ciidamada ammaanka, walow kooxihii dilka geystay ay goor sii horeysay ay goobta ka baxsadeen.
Bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo, ayaa walaac ka muujiyay dilka caawa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan ee magaalada loogu geystay.
Nabaddoonkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn looga yaqaanay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Dilka caawa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa ku soo aadaya, xilli dilal qorsheysan ay ka dhacayeen toddobaadyadii la soo dhaafay Koonfurta Gaalkacyo.
Suldan Cabdulahi suldaan